Damaanad - Jade Technology Co., Ltd
Inta lagu jiro waqtiga damaanada, haddii wax dhibaato ah, waxaan ka dhigi doonaa dadaal kasta si ay kuu siiyaan adeegyo lagu qanci karo. Si loo xaqiijiyo in aad hesho gargaarka damaanad wax soo saarka buuxa, fadlan taxadar leh u akhri qaybaha soo socda:
Waxaannu ku ogeysiinaynaa sida hoos ku qoran:
Muddada damaanad alaabta Jade waa 12 bilood laga bilaabo taariikhda bixinta biilka ee shixnadda.
All alaabooyinka lagu iibiyo Jade:
A) Siiso waxyaabo kala duwan consumable ama qaybo ka bedelay.
B) In la siiyo taageero suuq muddada dheer: injineer xirfadeed kaa caawin doontaa in ay ku taliyaan soo saarka ugu haboon ka dib markii barashada shuruudaha macaamiishaadu ', iyo astaysto xal loogu talagalay ka mid ah codsiyada gaar ah.
C) Hayso siyaasad laabto 2%, haddii wax soo saarka haleysan yihiin wax ka yar 2% tirada wax iibsiga, waxaan kuu soo diri doonaa qaybo dayactir ama ku dar magdhow si aad si soo socda. Laakiin haddii wax soo saarka haleysan yihiin in ka badan 2% ee tirada si, ha ka welwelin, soo noqon weelka oo dhan dib noogu soo our kharashka.
Kala duwan oo damaanad kuma jiraan waxyaabaha soo socda:
fashilaad sababa dhaawac jidheed, hawlgalka aan habboonayn, isbedel aan la ogalayn in wax soo saarka, iyo isku dayaan in ay cusboonaysiiyaan ama masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ama samee.
Wixii su'aalo dheeraad ah, fadlan kala soo xiriir lambarada hoos ku qoran: + 86-136-5584-5675 ama buuxi foomka baaritaan at " Nala soo xiriir".